सुरु भयो फेसबुक निर्माताबीच लडाई : अब के होला ? « Janaboli
सुरु भयो फेसबुक निर्माताबीच लडाई : अब के होला ?
काठमाडौ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बारे नयाँ तथ्य फेला परेको छ । मार्क जुकरवर्गलाई फेसबुकको स्थापना गर्न सघाएका क्रिस ह्युग्सले सो कम्पनीलाई तोड्नुपर्ने आह्वान गरेका छन् ।
बिहिबार ‘न्यु योर्क टाइम्स’ मा एक लामो लेख लेख्दै ह्युगले जुकरवर्गसँग हाल ‘निजी वा सरकारी निकायमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिभन्दा बढी प्रभाव भएको’ बताएका छन् । जुकरवर्गको ‘असाधरण शक्ति’ ले हानी पुर्याउन सक्ने भन्दै उनले ‘नियामकले फेसबुकलाई टुक्राउने समय आएको छ’ भनेर लेखेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘जुकरवर्ग असल र दयालु मानिस हुन् । तर उनले कम्पनीको विस्तारमा मात्र ध्यान दिँदा सुरक्षालाई बलिदान गरे र क्लिक बढाउने धुनमा सबै खालको मयार्दालाई तिलाञ्जली दिइएका छन् ।’
उनले भने, ‘न्युज फिडको अल्गोरिदमले हाम्रो संस्कृतिलाई जसरी बदल्यो, निर्वाचनलाई जुन हदमा प्रभाव पार्यो र राष्ट्रवादी नेतालाई जसरी शक्ति प्रदान गर्यो त्यसको सम्भावनाबारे हामीले सुरुवाती दिनमै प्रयाप्त सोच विचार नगरेकोमा म आफैप्रति असन्तुष्ट छु ।’
‘आजको दिनमा मार्कका नजिक रहेकाहरुले उनको गलत विश्वसप्रति प्रश्न गर्नेभन्दा पनि प्रशंसा गर्ने खालको देखिन्छ ।’ पछिल्लो समय फेसबुक र अन्य अनलाइन मञ्चमाथि कडा खालको नियन्त्रणको माग गर्ने क्रम बढेको छ ।
फेसबुकका व्यक्तिगत तथ्याङ्क अनुमति नलिई तेस्रो पक्षले प्रयोग गरिरहेको कयौँ घटना बाहिरिएसँगै फेसबुकमाथि नियन्त्रण राख्ने माग उठ्न थालेका थिए । त्यस्तै फेसबुकमाथि कयौँ देशमा निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको र गलत सूचना फैलाएको आरोप पनि छ ।
यता, जकरवर्गले पनि आफू केही नियमनको लागि खुल्ला रहेको संकेत गरेका छन् । मार्चमा वाशिङ्टन पोष्टमा एक लेख लेख्दै नियमन कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने भन्ने लेखेका थिए । ह्युग फेसबुक आफैले नियमनको आह्वान गर्नु पछाडि चाल देख्छन् ।
फेसबुकले विगतमा कयौँ सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई गरेको छ । यस्तो खुल्ला बजार विरोधी अभ्यासमा अमेरिकामा ठूलो कारबाही हुने गर्छ । ह्युगका अनुसार यो आह्वान फेसबुकमाथिको ‘एन्टी–ट्रस्ट ल–एकाधिकार विराधी कानुन’को बहसमाथिको ध्यान अन्यत्र तान्न हो ।
यसको समाधानको लागि ह्युगले इन्स्टाग्राम र ह्वाटस–एपमाथि फेसबुकको स्वामित्व अन्त्य गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले जुकरवर्गले मानिसहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पनि आरोप लगाएका छन् ।
ह्युगले अमेरिकी सरकारले एक नयाँ एजेन्सी निर्माण गरेरै प्रविधि उद्योगमाथि नियमन कायम राख्नु पर्ने माग गरेका छन् । ‘जुकरवर्गले हाल उपभोक्ताको छनौटलाई सिमित गरेका छन् । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुचिश्चित गर्ने काम सरकारको हो र उसले त्यसलाई सुनिश्चितता गर्न सबै विकल्प चाल्नुपर्छ उनले भनेका छन् ।’ एजेन्सी source